गायक राजेशको भान्सा कोठामा अंगालोमै भेटिइन् सुरक्षा, के उनीहरु प्रेममा छन् ? – Sandesh Press
गायक राजेशको भान्सा कोठामा अंगालोमै भेटिइन् सुरक्षा, के उनीहरु प्रेममा छन् ?
June 29, 2021 593
काठमाडौ । दशकौ देखि नेपाली गित सङ्गीत पार्श्व गायन, आधुनिक सुगम सङ्गीत, पप देखि रक सम्म सबै क्षत्र मा एकछत्र राज गर्दै आएका राई इज किङ राजेश पायल राई को बिहे को चर्चा खुब हुने गर्दछ ।
कहिले नेपाल का सुपरहिट नायिकाहरु सङ्ग त कहिले काहीँ बिदेशी सेलिब्रेटी सङ्ग पनि नाम जोडिने गरेको उनको । तर अहिले सम्म अविवाहित राजेशको विवाहको चिन्ता उनका फ्यानलाई पनि छ । त्यसैले उनको विवाहको बारेमा प्रश्न उठ्ने गर्छ । राजेशको नाम कहिले काहीं सुरक्षासंग पनि जोडिएको छ । उनी अहिले राजेशको भान्सा कोठामा भेटिएकी छन् ।
राजेश जिस्कदै भन्छन्, मेरो चाहना त भाउजु नै बनाउँ भन्ने हो । उनीहरुले निकै रमाइलो कुराकानी गरेका छन् भने संगै रमाइलो समय पनि विताएका छन् । राजेश र सुरक्षालाई संगै भेटिएका विश्व लिम्बु पनि भेटिएका छन् । गायीका सुरक्षा र उनीहरुको रमाइलो कुराकानीले राजेश र सुरक्षाबीच वास्तवमै प्रेम छ वा के हो ? यो भिडियो हेरैपछि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।
राजेश र सुरक्षालाई उनीहरुका फ्यानले जोडीका रुपमा मन पराएका छन् । राजेश र सुरक्षाको ब्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल ह्याण्डलमा पनि फ्यानले विवाह गर्नुपर्यो भनेर सुझाव दिने गरेका छन् । तर सुरक्षाले भोली के हुन सक्छ भन्न नसकिने भनेर विवाहको सम्भावनालाई पनि देखाएकी छन् । राजेशको नाम यस अघि नायीका रेखा थापासंग पनि जोडिने गरेको थियो । त्यस्तै केकी अधिकारीको नाम पनि फ्यानहरुले राजेशसंग जोडीदिएका थिए । अहिले सुरक्षाको नाम राजेशसंग जोडिएको छ ।
Prevस्वयम् भगवान शिवले दिएका छन् यी ३ राशिलाई करोडपति हुने बरदान, पानी जसरी वर्षिन्छ पैसा
Nextप्रेस काउन्सिलले बन्द गरायो रूपा सुनारलाई पैसा लिएको आरोप लगाउने अनलाइन मिडिया
तिहार सकिएलगत्तै ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
यस समयमा गर्भमा आएका बच्चा हुन्छन् निकै भाग्यशाली, कुन हो त त्यो समय ?